Obodo ndị mara mma dị nso na Madrid na ị kwesịrị ịma | Njem zuru oke
Mgbe anyị na-aga Madrid, anyị na-echekarị gbasara ịga n’etiti na ebe ndị ahụ kacha nwee akara ngosi. Ma nke bụ́ eziokwu bụ na ọ dịghị afụ ụfụ ịhapụ oge maka ndị ahụ obodo mara mma di nso Madrid, n’ihi na enwere ma ị ga-ahụ ha n’anya. Nkuku ọdịnala, nke ihe okike gbara gburugburu na ọtụtụ amara nke ga-eme ka ị daa n'ịhụnanya.
Maka ezumike na a ngwụsị izu, Obodo ndị mara mma dị nso na Madrid ga-adị njikere inye gị ihe kacha mma. Maka na odi nkpa ka anyi gbanariri igwe mmadu ahu ma nye onwe anyi oge ezumike, ma oburu na enwere ike, idere duu. Chọpụta ụzọ ndị a niile anyị kwadebeere gị!
1 Obodo ndị mara mma dị nso na Madrid, Nuevo Baztán
4 Chinchón, ọzọ nke mara mma obodo nso Madrid
7 La Hiruela, otu n'ime obodo mara mma dị nso na Madrid
Obodo ndị mara mma dị nso na Madrid, Nuevo Baztán
Ọtụtụ obodo mara mma dị nso na Madrid, ma ugbu a, anyị hapụrụ nke a na-akpọ, Nuevo Batzán. Ọ dị ihe dị ka kilomita iri anọ na ise n'ụgbọala ma ọ bụ otu n'ime nhọrọ dị ukwuu izu ike. Ka ị na-agagharị na ya, ị ga-achọpụta na imirikiti ụlọ ya nwere limestone, ebe ụdị akpọrọ 'Churrigueresque' dịkwa. Ozugbo ebe a, ọ dịghị ihe dị ka ileta ndị Yenelọ Goyeneche, nke bụ ebe obibi nke onye okike Juan de Goyeneche. Na-enweghị echefu ụka nke San Francisco Javier, ya na ụlọ elu abụọ na-ejedebe na spiers.
North nke Madrid anyị hụrụ Torrelaguna. Na nke a ị nwere ntakịrị nso karịa nke gara aga, ebe ọ bụ na ihe dịka ọkara elekere, ị ga-anụ ụtọ akụkụ ya niile. Cornersfọdụ nkuku ndị bidoro na ishka Parish nke La Magdalena, nke Ọ bụ Gothic ma malite na narị afọ nke XNUMX. Mgbe ị na aka nke ọzọ, ị gaghị echefu Abbey nke ụmụ nwanyị nke narị afọ nke XNUMX ma ọ bụ Palacio de Salinas, nke ụdị Renaissance. A ije site na Plaza Mayor na Mpaghara Halllọ Nzukọ ga-ejedebe na nleta gị.
E kewara ebe a Top Patones na ala ala ọ dịkwa n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke Madrid. Karịsịa, mpaghara elu ahụ na-egosi ihe a na-akpọ ụlọ ojii n'ihi na ọ na-eji slate dị ka isi ihe. Mpaghara nke dị ihe dị ka 50 nkeji si Madrid na nke zuru oke iji nọrọ otu ụbọchị, pụọ na mkpọtụ na nrụgide niile nke nnukwu obodo. Chọọchị San José ma ọ bụ Hermitage nke Virgen de la Oliva bụ ụfọdụ n'ime isi ihe dị mkpa iburu n'uche.
Chinchón, ọzọ nke mara mma obodo nso Madrid
N'okwu a, ọ dị kilomita 44 na ndịda ọwụwa anyanwụ nke isi obodo. Nke na - emekwa ka ọ dị mkpa karịa ụbọchị ole ma ole. Nke mbụ, anyị ga-agagharị na nke gị akụkọ ihe mere eme na etiti na ya isi square. Ebee ka arụ arcad na ụlọ dị na narị afọ nke XNUMX. Chọọchị nke Nwanyị Nwanyị Nwanyị anyị nwere nkwonkwo nwere ọtụtụ ụdị si Gothic ruo Plateresque dị ka Baroque na Renaissance. Ma Castle nke Ngụgụ na ebe obibi ndị mọnk nke San Agustín, bụ ebe ọzọ dị mkpa maka nleta.
Ọ bụ otu n’ime ime obodo kachasị ukwuu ma nọrọ n’ala ala Sierra de Guadarrama. O nwere oke nketa nke bidoro na Nnukwu ụlọ nke Mendoza. Ọ bụ ebe ewusiri ike nke ụlọ eze malitere na 1475. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ otu n'ime ebe kachasị mma echekwara taa. Castlọ ochie ma ọ bụ theka Nuestra Señora de las Nieves bụkwa isi ihe ndị ọzọ nwere mmasị. Tinyere ebe ihe ochie, ebe a ghọrọ otu n'ime isi ebe ndị njem nleta dị ihe dị ka minit 45 site na Madrid.
Ọ dịlarịrị ókèala Ávila na Toledo, nke mere ka anyị gafere ntakịrị site na Madrid, ihe dị ka kilomita 72. Iji ruo ebe ahụ, ị ​​ga-ewere M-501 ma nwee ọ anotherụ na ebe ọzọ dị mkpa. Lee ị ga-enwe Castle of Coracera, nke a makwaara dị ka nnukwu ụlọ San Matín de Valdeiglesias. Na mgbakwunye na Ihe nketa nke Ecce Homo ma ọ bụ Nwanyị Nwanyị Ahụ Ike, n'etiti ndị ọzọ.
La Hiruela, otu n'ime obodo mara mma dị nso na Madrid
Ọ bụ eziokwu na ọ bụ otu n’ime ime ime obodo pere mpe, mana nke a apụtaghị na amara ya ebelatala. Ebe ndị bi na ya pere mpe pere mpe, La Hiruela gara n'ihu ịbụ ebe echekwara nke ọma. N'okwu a, anyị nwere ike ịga ije dị mfe iji lelee ya. Ga eleta ma igwe ihe igwe ya ma ụlọ onye nkuzi ma ọ bụ nke onye nchụàjà. Mpaghara emebeghị mgbanwe ọ bụla na nke na-eduga anyị n'ikwu okwu banyere ebe dị jụụ ma dịkwa mfe.
North nke Madrid anyị nwere Horcajo de la Sierra. Gburugburu otu di na nwunye nke iyi na emi odude ke ugwu massif nke Somosierra. Ya mere, anyị enwetala echiche nke ịma mma gbara ya gburugburu. Ọ bụ ya mere o ji dịkwa mkpa ka anyị buru n'uche mgbe anyị na-eche ịgbaga n'obodo ukwu. Have nwere di na nwunye nke ụka na otu onye n’ime ha nwere gothic imecha. N’ebe di nso gi na ndi ezinulo gi na ha na enwe obi uto n’ekele nke ogba egwuru-egwu, nke nwere otutu umuaka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Obodo ndị mara mma dị nso na Madrid
Omenala ndị Brazil
Onu ala di elu njem na Europe